Ọrụ nke Forex Broker - Mụta ahia 2
Ọrụ nke Forex Broker
Kwute okwu 'Forex' na igwe mmadụ, ọ gaghị abụ okwu ọhụrụ n'etiti ọtụtụ ndị folks. Ihe kpatara ya bụ na ahịa ahịa na-arị elu mgbe niile, na-ere ugbu a ihe karịrị ijeri $ 5 kwa ụbọchị.
O doro anya na ahịa ahịa ahịa kacha mma, na onye ọ bụla chọrọ itinye aka na ya.
Mana gini na eme ahia mbu?
E nwere ọtụtụ ihe mere ahịa ji adọta ọtụtụ ndị ahịa. Otu n'ime ihe kpatara ya bụ na ahịa dị mfe ịnweta.
Otú ọ dị, isi ihe kpatara uto ngwa ngwa nke ahịa Forex bụ mmetụta nke ndị na-ere ahịa azụmaahịa.
A forex ore bụ ihu ọma na intermediary ekpede azụmahịa iji na nnọchite nke ahịa. Broka na-enye ikpo okwu maka ndị ahịa ịzụta yana ire ego.
Inwe ezigbo ore ahia bụ ihe niile ịchọrọ ịmalite azụmaahịa Forex. Site na onye na-azụ ahịa Forex, onye ahịa ọ bụla nwere ike ịnweta ahịa ahịa ngwa ngwa.
Ọrụ nke Forex Trader
Obi abụọ adịghị ya, onye na-ere ahịa na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ahịa ahịa. Ma dị ka onye mbido, ị ghọtara ọrụ ndị na-ere ahịa na-arụ? Nke a bụ ụfọdụ n'ime ihe odide bụ isi nke Forex broker:
Njikọ dị n’etiti ahịa na Ahịa
Ma ọ dịkarịa ala, onye na-ere ahịa azụmaahịa bụ njikọ dị n'etiti ahịa na ahịa ndị ahịa. Onye na-ere ahịa na-elekọta ndị ahịa ọ bụla ịbanye n'ahịa ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị ekwe omume ndị ahịa novice iso isi na ndị ahịa azụmaahịa na ahịa ahụ.
Ya mere, ndị na-ere ahịa na-abịa iji nyere aka belata oghere ahụ ma melite ndị na-ere ahịa mkpọsa na ikpo okwu kachasị mma maka ịzụ ahịa.
Ahia n'aha ndi ahia
Mgbe ụfọdụ ụfọdụ ndị ahịa nwere ike ịnye ahịa a n'aha ndị ahịa. The ore na-enye ahụmahụ na ya mere na-eme ka ọ ka mma ọbụna maka retail ahịa na-enweta ihe uru karịa ha nwere ike mere ya onwe ha.
Enwere ọtụtụ ụzọ onye ahịa nwere ike isi nweta ego na azụmaahịa azụmaahịa, yana ndị na-ere ahịa bụ otu n'ime ụzọ ndị ama ama. Ọzọkwa, ha nwere ike iji igwe eji eme ihe (ọkachamara Advisor EAs).
Ndi ozuzu ahia
Ahịa ahịa nwere ike ọ gaghị adị mfe dịka o nwere ike iyi. N'ezie, ahịa azụmaahịa chọrọ ọtụtụ agụmakwụkwọ na ndidi. Ya mere, ndị na-ere ahịa nwere ike inye ọzụzụ kachasị mma maka ndị ahịa ọ bụla.
Site na agụmakwụkwọ kachasị mma, onye na-ere ahia nwere ike inweta ezigbo uru, ndị na-ere ahịa na-enyekwa ozi maka otu esi belata mbibi ọ na-abawanye uru.
Ma, olee otu usoro dum na Forex broker na-arụ ọrụ?
Ewezuga Onye Ahịa na-achọ isi obodo iji malite azụmaahịa na ahịa azụmaahịa, onye na-ere ahịa dịkwa oke mkpa.
Onye ahia na-amalite site na imeghe akaụntụ n'elu ikpo okwu nke onye na-ere ahia ebe a na-ere ahịa niile. Ntinye ego mbu choro iji malite ahia sitere na opekata mpe $ 10.
Azụmahịa Forex na-arụ ọrụ na onye na-azụ ahịa na-azụta ụzọ ego enyegoro na ala wee ree na elu iji nweta uru. Na ore ahia mgbe ahụ na-ewe a ụfọdụ ruru si trades mere ebubo na pips (a ụfọdụ nke ego ụzọ abụọ).
Ka o sina dị, inwe ihe ịga nke ọma na ahịa ahịa na-amalite site na ụdị onye na-ere ahịa na-ahọrọ. Enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ma ha na-enye nhọrọ dị iche iche.
Ya mere, ọ bụ ọrụ nke onye ọ bụla na-azụ ahịa iji hụ na onye na-azụ ahịa ahọpụtara nwere ntụkwasị obi ma nwee aha ọma.
Ya mere, a chọrọ oge dị ukwuu iji mụọ onye ọ bụla na-ere ahịa. Ọtụtụ nyocha ịntanetị banyere onye na-ere ahịa nwere ike inyere gị aka ịnọ n'ihu banyere otu onye na-ere ahịa. Chọghị ka onye na-abụghị onye a ma ama na-ere ahịa na-ejikwa ego gị tara ahụhụ.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ onye na-ere ahịa na Forex, ị nwere ike ịtụgharị na nke anyị ndepụta nke ndị na-ere ahịa Forex. Biko kpachara anya na ị ga-eme nyocha nke gị ma were oge gị. Tupu ịmalite ezigbo ahia, ị kwesịrị ị na-emeghe a ngosi akaụntụ mbụ na onye ọ bụla na gị nwere mmasị-agbanwe ndepụta nke mere na ị nwere ike na-agbalị ọ bụla ruo oge.
N'ihi ya, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa na Forex na-aga n'ihu, ị ga-achọ onye azụmaahịa a pụrụ ịdabere na ya, agụmakwụkwọ bụ isi ihe iji nweta aka gị na nke ziri ezi.
Onye edemede: Ali Qamar
Banyere chepụtara: Ali Qamar
Emelitere ikpeazụ: November 2nd, 2019
Ali Qamar bụ onye edemede na onye ngọngọ nke oge na onye kwenyesiri ike na cryptocurrencies nwere ihe eji eme ihe. Ali nwere mmasị ikpuchi isiokwu ọ bụla metụtara TRON ma nwee nnukwu mmasị na ntanetị ndị ọzọ dị ka Ripple, Stellar, Bitcoin na ndị ọzọ.